आइजिपीलाई पत्र लेख्दा जागिर चट् गरिएका प्रहरी जवानलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
आइजिपीलाई पत्र लेख्दा जागिर चट् गरिएका प्रहरी जवानलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश
काठमाडौं । प्रहरी सँगठन भित्र सुधारको आवाज उठाँउदा जागिर गुमाएका प्रहरी जवान दीपेन्द्र बहादुर चन्दलाई पुर्नबहाली गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत दिपायलले जागिरबाट हटाइएका प्रहरी जवान दिपेन्द्र चन्द निर्दोस ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र नसरुल्लाह अंसारीको संयुक्त इजलासले जागिरबाट हटाउने निर्णय बदर गरी, जागिरबाट हटाइएको मितिदेखी हालसम्मको सबै तलब, रासन, भत्ता र फ्री स्केलका लत्ताकपडा समेत दिइ प्रहरी जवान पदमा पुनर्वहाली गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको छ।
प्रहरी जवान चन्दले सत्यमेव जयते भने झैँ अन्ततः सत्यको विजय हुँदा न्याय पाएको अनुभुति भएको बताएका छन्। प्रहरी सँगठन भित्र सुधारको माग गर्दै गत बैशाखमा चन्दले प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई एउटा निवेदन पत्र लेखेका थिए।
निवेदनमा प्रहरी सँगठन भित्र सुधारका बुँदाहरु समेटिएका थिए। उक्त पत्र पछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा अनलाईन न्युज पोर्टलहरुमा भाइरल बन्न पुग्यो। पत्र सार्वजनिक भएपछि कैशालीका प्रहरी नायव उपरिक्षक विर बहाबदुर बुढामगरले प्रहरीको मर्यादा विपरित पत्र लेखेको भन्दै जवान चन्द माथि कुटपिट गरे।
तर, डिएसपी बुढामगरले चन्दले लगाएको त्यो आरोप सत्य भएको प्रस्ट्याएका छन् । जवान चन्दले न्याय माग्दा डिएसपीको कुटाई खानु परेको भन्दै प्रहरी महानिरिक्षक खवेन्द्र खनाल कहाँ धाए। तर , आईजिपीले पनि न्याय नदिएको चन्दको आरोप छ।
त्यसपछि एसएसपीले पुनर्बहाली गरिदिन्छु मिलापत्र गर भनी आश्वासन दिएपछि जवान चन्दले जिल्ला अदालत कैलालीमा मिलापत्र गरे। मिलापत्र डीएसपी सँगको कुटपिट मुद्दामा भएको थियो। मिलापत्र गर्ने काम भएपछि एसएसपीले धोका दिएको चन्द बताउँछन्।
त्यसको केहि दिनपछि चन्दलाई जिल्ला प्रहरी कार्यलय कैलालीले बर्खास्तीको पत्र थमायो। चन्द भन्छन्, ‘कुटपिट गर्ने डिएस्पीमाथि कारबाहि हुनुपथ्र्यौ तर उनलाई बचाउन मलाई बलिको बोको बनाइयो। एसएस्पीले चाहेर मात्रै मेरो जागिर गए जस्तो लाग्दैन। यसमा आईजिपी सर्वेन्द्र खनालको हात होला।
चन्द प्रहरी सँगठन भित्र विकृति रहेको दुखेसो पोख्छन्। गलत कुराका विरुद्ध डटेर बोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
यस्तो छ जवान चन्दले आईजीपीलाई लेखेको पत्र ।
सर्वप्रथम, नेपाल प्रहरीको आईजीपी जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनु भएकोमा नवनियुक्त आईजीपी महोदयप्रति हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हाम्रा प्रहरी कार्यालयका फाँटमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुले तुलनात्मक रूपमा फिल्डमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू भन्दा बढी सहुलियत, फुर्सद, ज्ञान र दक्षता हासिल गर्ने मौका पाउँछन् भन्ने कुरो श्रीमानमा विदित नैं छ । दुस्खको कुरो के छ भने राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुच भएको प्रहरी कर्मचारी कम योग्य भए पनि उसले जागिर अवधिभर फाँटमै बसेर आराम र शानसँग जागिर खान्छ तर ऐ. ठाउँमा पहुच नभएको अर्को प्रहरी कर्मचारीले बढी योग्य भए पनि पहुच नभएको कारण फाँटमा कहिल्यै काम गर्न पाउँदैन ! यस किसिमको असमानता र कुप्रथा अन्त्य गर्न सुझाव दिदै यसअघि कुबेरसिंह राना आईजीपी सरको पालादेखि हरेक नवनियुक्त आईजीपी सरहरुलाई निवेदन प्रेषित गर्दै आइरहेकोमा हालसम्म केही भएको छैन तर हजुरको कार्यकालमा त यस विषयमा पक्कै केही पहल गरिनेछ भन्ने आशाले यो सुझावमूलक निवेदन प्रेषित गरेको छु। निम्न तरिकाले यो असमानता अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार कुनै न कुनै मापदण्ड निर्धारण गरी वा नियमावलीमा नियम थप गरी, प्र कले फाँटमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिनु न्यायिक दृष्टिकोणले पनि जरूरी छ, किनकि यस्तो व्यवस्था नहुनाले तपसिलमा उल्लेखित योग्यता र क्षमता भएको मैले, मेरो जागिर अवधि १२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हालसम्म कतै पनि फाँटमा बसी काम गर्ने मौका पाएको छैन ! म एउटा उदाहरण मात्रै हूँ, मजस्ता हजारौं योग्य प्र.क.हरुले राजनीतिक र प्रशासनिक पहुच नभएको कारणले फाँटमा काम गर्ने मौका पाएका छैनन् ।